Iray minitra monja…. | NewsMada
Iray minitra monja….
Par Taratra sur 22/03/2016
Miditra amin’ny herinandro masina isika ankehitriny. Herinandro mialoha ny hankalazaina ny andron’ny Paska, izay niakaran’ny Tompo any an-danitra. Efa somebiseby ireo mpino hamonjy fiangonana isan-kariva rehefa mirava avy miasa na avy mianatra iny hangata-pitahiana sy hangata-pamelana amin’ireo ratsy na/sy ota vita hatrizay.
Androm-piravoravoana ho an’ny mpino ny andron’ny Paska. Maro ihany koa anefa ireo tsy mino no mba miara-paly amin’ireo mino ihany. Fa olana ho an’ny vahoaka malagasy, mino na tsy mino, anefa, ny hahitana vola hahafaha-mifety sy mifaly mandritra ny fankalazana ny Paska. Mba firy isan-jaton’ny Malagasy moa no tena miaina ara-dalàna, eny fa na tsy manana ny ampy aza mba afaka mivelona tsara ihany? Toa tanteraka ihany ilay fomba fiteny hoe “ny manana, manana hatrany, fa ny tsy manana, tsy manana eny foana koa”.
Tsy izay anefa no tian-kahatongavana eto. Ny azo ambara angamba, ohatra ny mba miarin-doha kely ny firenena ankehitriny. Eny fa na mbola maro aza ireo ezaka tokonyh ataon’ny fanjakana foibe amin’ny fanarenana ny lesoka nandritra iny Tetezamita teo iny. Mbola tsy foana tanteraka ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy. Mbola sarotra ny fanarenana ireo lalam-pirenena tapitra potika amin’izao fotoana izao. Mbola sarotra ny hanarenana an’Antananarivo Renivohitra amin’ireo mpivarotra mirongatra eny amoron-dalana. Mbola sarotra ny hialana amin’ny tondra-drano etsy sy eroa rehefa fotoam-pahavaratra hoatra izao. Mbola sarotra ny amin’ny fanondranana an-tsokosoko ireo harena sarobidy, sns.
Izany rehetra izany anefa, tsy vitan’ny kabary mitohoka “micro” fotsiny ihany fa mila paikady marim-pototra tsara. “Ny tranom-pody”, hono mantsy, “no vita amin’ny vava”, noho izany, mila mitodika sy manompy maso ny fahavoazan’ny vahoaka ny mpitondra na dia iray minitra monja aza.